ခရီးအတူတူသွားမယ့် စုံတွဲတွေအတွက် မှတ်ထားစရာ အချက်ကလေးတွေ - YOYARLAY Digital Media and News
ချစ်သူစုံတွဲ နှစ်ယောက်အတူတူ ခရီးသွားတာဟာ အကောင်းဆုံးမြတ်နိုးစရာ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး အမှတ်တရအဖြစ် တစ်သက်လုံး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ “လူတစ်ယောက်အကြောင်း သိချင်ရင် ခရီးအတူတူသွား” ဆိုတဲ့အတိုင်း ကိုယ်နဲ့တစ်သက်လုံး အတူတူဖြတ်သန်းသွားမယ့် လက်တွဲဖော်ရဲ့အကြောင်းကို ခရီးအတူသွားကြည့်ရင် ကောင်းကောင်း သိနိုင်မှာပါ။
ခရီးစဉ်တစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေကို ကွာကျစေနိုင်ပြီး သရုပ်အမှန်ကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ခရီးအတူတူသွားတဲ့အခါ အကောင်းမွန်ဆုံး အချိန်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ သတိထားစရာ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့ အတူတူသွားမယ့် ပထမဆုံးခရီးဟာ ခရီးတိုလေးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ခရီးတိုလေးဖြစ်တာကြောင့် ရှည်လျားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေလို အခက်အခဲ အများကြီး ကြုံတွေ့နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ခရီးစဉ်အကြီးတွေမသွားခင် အကြိုသဘောမျိူးအနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့သူရဲ့ အခက်အခဲတေါကို သိရှိပြီး ညိုယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် တိတိကျကျ ပိုသိလာနိုင်လို့ နောက်ပိုင်းခရီးသွားတဲ့အခါ သတိထားသင့်တာလေးတွေကို နားလည်သိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ပိုကာင်းမွန်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ သွားမယ့်ခရီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှော်လင့်ချက် အများကြီး မထားထားပါနဲ့။ ကြိုတင်အစီအစဉ်ဆွဲမထားဘဲ တွေ့ကြုံရသမျှ အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို အလိုက်သင့်လေး ဖြတ်ကျော်သွားတာက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူစုံတွဲအချင်းချင်းမျှဝေခြင်းဟာ ဂရုစိုက်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းပါပဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး အလေးချိန်မျှမျှတတ သယ်ဆောင်ခြင်းဟာလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ငြိုငြင်စရာတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ရဲ့ ပစ္စည်းတေါကို တစ်ယောက်က ကူညီသယ်ဆောင်ပေးတာကိုက ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ၊အားနည်းမူကို ဂရုပြုပြီး တာဝန်တွေကို ခွဲဝေသင့်ပါတယ်။ ဒီလို တာဝန်ခွဲဝေတာဟာ ခရီးသွားတဲ့အခါ အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မူကို တစ်ယောက်က ဂရုပြုပြီး တာဝန်ခွဲဝေယူတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ခရီးစဉ် မစခင်ကတည်းက စုံတွဲနှစ်ယောက်ကြားမှာ သုံးမယ့်ငွေပမာဏကို ကြိုပြီး တွက်ထားရပါမယ်။ ဒါမှ ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲ ကြုံကြုံ စိတ်ရှည်ပါ။ ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်း အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကြုံရနိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စရာတွေများစွာလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ယောက်စလုံးက စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး နားလည်မှုနဲ့ ဖြတ်ကျော်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကြည်နူးစရာ ခရီးစဉ်လေးအဖြစ် အဆုံးသတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချူပ်ပါ။ ချစ်သူတွေ အတူ ခရီးသွားတဲ့အခါ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကို ငြင်းခုံရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ရန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရေရှည်အတွက်လည်း မကောင်းသလို ပျော်ရွှင်စရာခရီးလေးကနေ စိတ်ညစ်စရာ ဝမ်းနည်းစရာခရီးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေ နှစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားတဲ့အခါ အခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာပြီး ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
Ref: internet & opinion
Previous Previous post: ၂၀၃၀ ခုနှစ်လောက်မှာ လကမ္ဘာပေါ် လူသားတွေ လက်တွေ့အခြေချ နေနိုင်တော့မည်
Next Next post: ဂျနီဖာလိုပက်ဇ် ပြောပြတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ အလှအပရေးရာ လျှို့ဝှက်ချက်များ
တစ်နှစ်တွင် လေးလသာ ဖူးမျှော်ခွင့်ရနိုင်သော အလောင်းတော် ကဿပမထေရ်စံကျောင်းတော်
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်လိုလျှင် ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအထိ တစ်နှစ်တွင် လေးလအတွင်းသာ သွားရောက်နိုင်သည်။ တောတောင်ထူထပ်သော သဘာဝဘေးမဲ့သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ရာသီဥတုမှာ အေးစိမ့်စိမ့်နိုင်လှသဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလသည် သွားရောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးလဖြစ်သည်။ ယခုအခေါက်နှင့်ဆိုလျှင် အလောင်းတော်ကဿပသို့ သွားရောက်သည်မှာ နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။…
Published: April 25, 201610:26 am Updated: December 2, 20191:07 pm
ရေသင်္ချိုင်း သို့မဟုတ် ကမ်းသာ သို့မဟုတ် ကသာ
သင်ဟာ ကိုလိုနီခေတ်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ယောက်များလား? ဒါမှမဟုတ် George Orwell ရဲ့ Burmese Days ဖတ်ပြီး ကသာရောက်ဖူးချင်နေသူလား? အဲဒါမှမဟုတ်သေးရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီး အရေးပိုင်မင်းရဲ့အိမ်ဆိုတာကို မြင်ဖူးချင်နေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ဒီကသာမြို့လေးကို ရောက်အောင်သွား ပြီး ဒီနေရာလေးတွေလည်ပတ်သင့်ပါတယ်နော်…။…
Published: July 25, 201911:59 am Updated: July 29, 20192:14 pm